Qaroominni Aksumiifi kan Roomaa wolitti hidhata cimaa qabaachuu isaatiif ragaan argame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Qaroominni Aksumiifi kan Roomaa wolitti hidhata cimaa qabaachuu isaatiif ragaan argame
Waa’ee qaroomina Aksumiin, keessumattuu ijaarsa siidaalee, wolqabatee wontoonni qajeelatti hinbeekamne heedutu jira. Isaaan keessaa inni guddaan gaafii siidaaleen Aksumii, kanniin yoo xiqqaate woggoota 2000 dhaabbataa turan, uumaa eenyuuti isa jedhu.
Qaroomina kana akka qaroomina ufdanda’ee kophaa isaatti naannoo Gaafa Afrikaatti abaabeetti namoonni fudhatan jiru; keessattu hayyoonni Itoophiyaa. Namoonni qaroomini kuni kan biyyoota biroo, qaroomina akka Masriifi ardii Asiyaa, irraa ergifatame ykn gara galfame worri jedhanis jiru. Amma garuu, guutummattis ta’uu baatu, waan yaada lammataa deeggaruu maluun wolitti kan bayan fakkaatu, qorattoonni.
Qorannoon iccitii siidaaleen Aksumiifi naannoon suni gara woggaa 2000 tiif dhokse qoqqotanii baasuufi ifa taasisuu adeemaa ture. Wonti qorannoon tibbanaa ifa godhe, qaaroominni Aksumii gara galchaa ta’uu isaatiif ammas ragaa amansiisaaa dhiheessuu baatus, qaroomina Roomaatiin hedduu wolitti hidhata qabaachuu isaati.
Qorattoonni Briitaaniyaa naannoo Aksumitti hambaalee seenaa irratti qorannoo adeemsisaa turaniiru. Gareen qorattootaa namoota 11 ufkeessaa qabu kuni, dadhabbii torbaan 6 booda, kan qotanii boolla keessaa baasan meeshaaleefi faaya gara garaa kan umrii ganna 2000 olii qabaniidha. Hedduun meeshaa kanniinii kan worra impaayera Roomaa ta’uunis mirkanaayeera. Meeshaaleen kunniin kan ifa taasisan hariiroon Aksumiifi Roomaa jidduu ture, hanga qorattoonni dura eeganiifi tilmaamanii olitti, kan umrii dheeraa qabu ta’uu isaati.
Meeshaa worra Roomaa kan Aksumitti argame
Meeshaaleen boolla keessaa qotamanii baafaman gosa heddu. Faayyi dubartii gosa adda addaatiifi meeshaan manaa hedduminaan keessatti argamu. Irra jireessi meeshaalee kanniinii naasa irraa kan tolfameedha.
Ammas wonti deebii osoo hinargatin hafe meeshaaleen kunniin worra Aksumiif Roomaa irraa dhufan moo worruma Roomaatu naannoo Aksumitti meeshaalee kanniinitti dhimma bayaa ture waan jedhu.
Louise Schofield, mataan garee qorattoota kanaa, ‘Aksumiifi Roomaan yeroo dheeraadhaaf hariiroo daldalaa akka qaban beekna. Ragaan amma argame knui kan ifa godhe wolqunnamtiin jidduu isaanii ture kan yeroo dheeraa ta’uu isaati,’ jette.
Previous articleYoomiif Qajeelchaa fiigicha mt 5000, Mohaammad Amaan mt 800n IAAF Diamond League Roomii injifatan
Next articleAirbus rookkeettii si’a heddu gara samiitti dhuka’uu dandeettu hojjachuudhaaf